Magaalota mijatoo taasisuuf hojjechuu qabna- MM Dr Abiy – Fana Broadcasting Corporate
Magaalota mijatoo taasisuuf hojjechuu qabna- MM Dr Abiy
Finfinnee, Gurraandhala 8,2011(FBC)- Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad guyyaa magaalotaa 8ffaa magaalaa Jigjigaatti kabajamu ilaalchisuun ergaa dabarsan.
Guyyichi sadarkaa magaalonni irra ga’an kan itti madaalan, muuxannoo kan walirraa qooddatan, bu’aa misoomaa fooyya’aa fi bulchiinsa gaarii kan galmeessisan kan itti galateeffataman, beekamtiin kan ittiin isaanif laatamuu fi itti badhaafamani jedhaniiru Dooktar Abiy ergaa guyyicha ilaalchisuun dabarsaniin.
Ayyaanichaan akka biyyaatti ida’amuun kan Ityoophiyummaan itti miidhagnu jedhan.
Magaalonni godaansa baadiyyyaadhaa gara isaaniitti taasifamu sirnaan keessummeessuun, jiraattotaa fi namoota keessa boqatanii darbaniif mijatoo, guddina biyyaafis akka gumaachan hojjechuuf kan walirraa ittiin baratumu ta’aan ibsan.
Bu’uuraaleen misoomaa ga’aa fi qulqullina qabu akka diriirfamu, hoji dhabdummaan akka hir’atu, bulchiinsa lafaa fooyyessuu, magariisummaa magaalotaa jajjabeessuu, teeknooloojiitti fayyadamuun jijjiirramuu fi ammayyoomuun kaayyoo keenya ta’uu qabaan dhaamaniiru.
Jijjiirrama amma caasaa sadarkaa gadiitti qaqqabsiisuun, tajajaila jiraattota quubsu laachuun xiyyeeffannaa keenya ta’uu qabas jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy ergaa isaanitiin.
Magaalonni bakka sabaa fi sablammoonni biyyattii erga takkaa itti jiraatan; fakkeenya Ityoophiyaati jedhan.
Waltajjiin obbolummaa Oromoo fi Gaambeellaa booru Gaambeellaatti gaggeeffama
Wiixataa eegalee barattoota fayyaa barnoota isaaniirratti hin argamnerratti…
Ityoophiyaa fi Riippabliikni Demokraatawa Koongoo hariiroo isaanii cimsuuf waliigalan
Dhaabbileen amantaa jaalala, waloomaa fi nageenyarratti akka hojjetan gaafatame